ko htike's prosaic collection: လူတိုင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါသည်။
လူတိုင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော် ဂမ်ဘာရီ လာပြီ ဆိုတဲ့ စာရေးလိုက်မိတော့ လူတွေက ဘာတွေ လုပ်ကြရမှာလဲ ဆိုတာတွေ မေးလာကြသလို၊ ကိုယ်ဘာသာ ဘာလို့ ပြန်မလုပ်တာလဲလို့ မေးလာကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကလည်း UN ကို မျှော်လင့်ထားနေလို့လား ဆိုပြီး မေးကြတာတွေ၊ ပြောကြတာတွေရှိလာာကပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲဆိုတာကို အရင်ပြောကြည့် တိုင်ပင်ချင်ပါတယ်။
လူတိုင်းခေါင်းဆောင် အဖြစ်နဲ့ ကိုယ့်ကို ကိုယ် သတ်မှတ်ပြီး ပြည်သူတိုင်းပါဝင် နိုင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ကြဖို့ ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ လူ ရာထောင်ချီတဲ့ လူအုပ်ကြီး တန်းစီပြီ ဆန္ဒထွက်ပြဖို့ စည်းရုံးခေါင်းဆောင်မှ ခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
မတရားတာကို မတရားဘူးလို့ သိပြီး၊ မတရားမူတွေကို ကိုယ့် အသိစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခေါင်းဆောင်ပြီး တွန်းလှန်ရာမှာ ပြည်သူတိုင်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။
နအဖတွေဟာ အကြောက်တရားနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ဖို့ ကြံနေတာပါ။ အဲဒီ အကြောက်တရားနဲ့ပဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ သူတို့ အကြောက်တရားကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင် အုပ်ချုပ်နိုင်ပါ့မလား ...
အဲဒီ အဖြေဟာ .. ပြည်သူတွေ လက်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီ အဖြေကို ဖြေကြည့်ကြရအောင်။
သူတို့တွေက ဥပဒေကို လက်တလုံးခြား လှည့်ပြီး အမျိုးမျိုး လိမ်ခဲ့ကြတာ အားလုံး အသိပါ။ အရှက်မရှိ ဗြောင်လိမ်တာတွေလဲ အများကြီးပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း သူတို့ ပြောနေတဲ့ ဥပဒေဆိုတာကို လက်တလုံးခြား ပြန်လုပ်ပြီး၊ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်လို့ရပါတယ်။
နအဖတွေဟာ သူတို့တွေ လုံခြုံဖို့၊ အတာအဆီး အကာ အရံတွေ လုပ်ပြီး ကန့်သတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီ အတားအဆီး အကန့်အသတ်တွေရဲ့ နောက်ဆုံး စည်းရိုးနားအထိ ကပ်ပြီး အလုပ် လုပ်ကိုင်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ကိုယ်လည်း အန္တရာယ်ပေးရာ မရောက်ပါဘူး။
ဥပမာ ... အခု ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်ကို မှတ်ပုံတင် မပါရင် တတ်လို့ မရဘူးလို့ ရည်ရွယ်တဲ့ စာမျိုးတွေကို ဘရားဂေါပကတွေက ထုတ်သလိုမျိုး လုပ်လာကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း ကိုယ့်ဘက်က အန္တရာယ်ကင်းအောင်၊ သူတို့ကိုလည်း တိုက်ခိုက်ရာ ရောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေက မတရားတာကို တွန်းလှန်ကာ ကိုယ့်ဘာသာ ခေါင်းဆောင်ပြီး လုပ်တဲ့ အနေနဲ့ သူတို့ တားထားတဲ့ နေရာကနေ လမ်းမပေါ်က ဘုရားကို ရှိခိုးတာ လုပ်လို့ရပါတယ်။
အိတ်ထဲမှာ မာကာပန် (Marker Pen) တွေ ဆောင်ထားပြီး လူလစ်တာနဲ့ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စာတွေ နံရံတွေမှာ ရေးလို့ရပါတယ်။
သံဃာတွေကို သတ်တဲ့ ဘာသာမဲ့ သန်းရွှေကို တော်လှန်ကြ
နအဖ လူလိမ်တွေ၊ နိုင်ငံတကာကို လိမ်နေပြီ
အပြစ်မဲ့ သံဃာတော်တွေကို ချက်ခြင်းလွှတ်
အစရှိသဖြင့် စဉ်းစားမိတာတွေကို ကိုယ့်ဘာသာခေါင်းဆောင် လုပ်ပြီး ရေးလို့ရပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နအဖနဲ့ သက်ဆိုင်သော စီပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ကိုယ့်ဘာသာ ဖော်ထုတ်ပြီး ပြည်သူလူထုကို နီးစပ်ရာ သပိတ်မှောက်ဖို့ နှိုးဆော်နိုင်ပါတယ်။
နအဖနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ သက်သာ ဆပ်ပြာမှုံ့၊
မြတ်ခိုင် ဦးစီးသော လျှပ်တပြတ် ဂျာနယ်၊
ကျော်ဆန်းပိုင်သော မြေနီကုန်းမှ အင်တာနက်ကဖေး
အစရှိတာတွေကို ခေါင်းဆောင် လုပ်ပြီးသပိတ်မှောက် နိုင်ပါတယ်။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် သူတို့၏ မိသားစုများကို တတ်နိုင်သမျှ အားပေးစကား ပြောပေးခြင်း၊ ကူညီပံပိုးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အတူ ဘုရားရှိခိုး ဆုတောင်းရာမှာလဲ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်စေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ အမြန်လွတ်မြောက်ရန် နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နအဖအား ယနေ့အထိ ကံဆောင် သပိတ်မှောက်နေကြသေ သံဃာတော်များကို ဆွမ်းကွမ်း ကပ်လှူ ပူဇော်ခြင်းများဖြင့် ကိုယ့်ကို ကိုယ် ခေါင်းဆောင်ပြီး တော်လှန်နိုင်ပါတယ်။
ထို အရာများထက် ပိုပြီး တတ်နိုင်လျှင် လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ နီးစပ်ရာလူများကို ဤသို့ တော်လှန်နည်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထိုထက်ပိုသော ထိရောက်သည့် တော်လှန်နည်းများကို စုပေါင်းတိုင်ပင် လုပ်ဆောင်ခြင်း အစရှိသဖြင့် မတရားမှုများကို တတ်နိုင်သမျှ တော်လှန် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါကြောင်း .. တင်ပြလိုက်ပါသည် ခင်ဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 15:52
another enlightening news from you. pls write what ppl from overseas could do as well.
10 November 2007 at 21:58
nge, good idea
Can anybody translate what extraterrestrials have to do please?...
10 November 2007 at 23:38
အလွန်ကောင်းမွန်သော အကြံညဏ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ဘို့ ဘဲ အရေးကြီးပါသည်။
အကြောက်တရား ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရန်ကြံနေသော နအဖ အား စုံမှိတ် မကြောက်ကြပါနှင့် ။ သတ္တိလေးများ မွေး ကြပါရန် ..
10 November 2007 at 23:47
Hello Ko htike,
11 November 2007 at 00:30
သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါ။ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်သူတွေ အန္တရယ် မဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက်ကြရမယ်။ ဥပမာ ဂျေဒိုးနတ်စားမယ့် အစား လမ်းဘေးမှာ ရောင်းနေတဲ့ မုန့်လက်ကောက် ၀ယ်စားကြပါဆိုတယ့်ဟာမျိုး ဆိုတာကို လူတွေအကြားမှာ ပျံ့နှံ့ သွားအောင် ကြိုးပမ်းကြရမယ်။ အဲဒီလို ပြည်သူလူထုတွေက ဂျေဒိုးနတ် လုံးဝ မစားတော့တဲ့ အခါကြရင် သူတို့ ကြံ့ဖွတ်တွေကို အတင်း ၀ယ်စားခိုင်းလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်မျိုးက ၈နာရီ သတင်းလာချိန်မှာ ၁၅ မိနစ်လောက် အိမ်တိုင်း တီဗွီ ပိတ် မီးပိတ်ထားကြဖို့ လှုံ့ ဆော်ရမယ်။ အောင်မြင်ပါစေ။
11 November 2007 at 03:24
11 November 2007 at 13:16
17 March 2009 at 06:09
25 March 2009 at 13:09
26 March 2009 at 04:13
免費成人圖片區台灣女優日本av女優成人視訊聊天成人電影院成人遊戲區視訊聊天交友影音電話交友視訊交友聊天室成人情色影音網情色文學小說情人影音視訊網鄰家女優火辣美眉自拍成人視訊免費視訊妹妹聊天室☆♀ 一夜激情聊天室 ☆♀偷窺視訊聊天室ut網愛聊天室☆♀ 0401影音視訊聊天室 ☆♀888視訊聊天室免費辣妹視訊聊天網激情成人聊天室無碼日本女優短片試看辣妹影音視訊激情網愛聊天影音視訊聊天情人網成人電影下載免費檳榔西施摸奶影片免費色咪咪影片網百分百貼影片區※免費a長片※小弟弟貼影片免費線上觀賞色情卡通a片女優線上 aa 片試看免費線上a電影直播免費影片線上直播免費a片線上觀賞免費辣妹脫衣秀免費a片線上觀看線上aaa片免費免費av甜心寶貝直播下載歐美免費a長片線上看av女優無碼非常好色6.0下載免費影片下載線上免費a片影片免費下載免費下載電影520免費影片豆豆情色風暴視訊免費sex520影片免費視訊聊天頻道女主播視訊聊天室日本女優美女寫真免費欣賞免費視訊聊天室入口免費視訊辣妹脫衣秀168視訊美女聊天室☆♀ 夜未眠成人影城 ☆♀小魔女自拍天堂激情成人網愛聊天室成人圖片討論區視訊線上交友網☆♀ 情色電影院☆♀☆♀ 辣妹影片☆♀人氣女優☆♀ 免費影片 ☆♀☆♀ 潮吹影片 ☆♀☆♀ 成人聊天網 ☆♀☆♀ av女優影片 ☆♀☆♀ 限制級a片 ☆♀成人貼片免費線上漫畫下載免費成人短片美女視訊聊天av女優神藤美香辣妹美少女寫真限制級電影0401影音視訊聊天室影音視訊聊天室成人影音視訊豆豆本土辣妹視訊情人影音視訊網辣妹妹視訊聊天室真人視訊影音聊天室華人影音視訊聊天網日本av女優免費影片區網路視訊聊天室麗的線上情色小遊戲天天情色分享區小瓢蟲情色論壇咪咪情色貼圖論壇免費情色電影分享區波波情色貼圖飯島愛的情色醫院星光情色討論版嘟嘟kiss情色網av女優排行美美交友情色網免費情色影片情色 聊天麗的 情色典獄長成人情色網台灣kiss情色網情色小遊戲情色電影小站s383情色大網咖天堂情色網撿來的av女優麗的 情色網台灣情色論壇情色a片 臺灣情色網情色視訊日本線上免費a片a片區a片分享免費線上觀看a片免費aaa片俱樂部分享自拍a片女優做愛限制級試看a片情色a片美女a片
13 April 2009 at 15:03
13 April 2009 at 16:37